श्रीमान नै पराई भएपछि… – PathivaraOnline
Home > जीवनशैली > श्रीमान नै पराई भएपछि…
admin November 17, 2021 जीवनशैली, समाज 0
रोल्पा । रोल्पा नगरपालिका–९ ह्वामाकी तिलकुमारी बुढाले १२ वर्षअघि रोल्पा नगरपालिका–६ कोङाका टेकसिंह गुरुङसँग विवाह गरिन् ।
सँगैमर्ने सँगै बाँच्ने कसम खाएर प्रेम विवाह गरेका उनीहरुबाट १२ वर्षमा चार छोरीको जन्म भयो । विवाह भएको चार वर्ष गाउँमै सँगै बसेका उनको जोडी रोजगारीको अवसर नपाएपछि कमाई गर्न विदेश जाने निष्कर्षमा पुग्यो । श्रीमतीले घर धान्ने र श्रीमान् विदेश गई कमाई गर्ने सल्लाहबमोजिम टेकसिंह ७ वर्षअघि कतार गए । कतारमा तीन वर्ष बसेका उनी त्यहाँ रहँदा भएको सबै कमाई घरमा पठाउँथे ।
श्रीमान् श्रीमतीबीच दिनहुँजसो फोनमा कुराकानी हुन्थ्यो । घर आउनेजाने चलिरहन्थ्यो । कतार बसाइ बिट मारेर घर आएका उनी केही समय मात्रै घर बसेर फेरि विदेश जाने निर्णयमा पुगे । कतारमा कमाएको पैसाले आफ्नै ठाउँमा कुनै रोजगार गर्न चाहन्थिन् तिलकुमारी । तर टेकसिंह भने नेपालमा कमाउन नसकिने भन्दै चार वर्षअघि कुवेत गए । कुवेत गएका उनी सुरुसुरुमा घरमा नियमित फोन गर्थे । सन्चोबिसन्चो फोनबाट आदानप्रदान हुँदा तिलकुमारीलाई श्रीमान् घरमै भएजस्तो लाग्थ्यो ।
श्रीमानले फोन गर्न छाडेको लामो समय भएको वयोवृद्ध सासुससुरालाई सुनाइनन् । छिमेकी तथा अरू इष्टमित्रलाई भनिन् तर कसै गरी श्रीमान्ले फोन नगर्नाका कारण बुझ्न सकिनन् । एक दिन सम्झेर पक्कै पनि फोन गर्लान् भन्ने सोचाइमा उनको चार वर्ष बितिसकेको छ तर श्रीमान्को फोनको घण्टी भने अझै बजेको छैन ।
श्रीमान् सम्झँदै छोरीहरुको भविष्य बनाउने, पढाउने काम, घरको दैनिकी तथा ८७ वर्षीय ससुरा र ७७ वर्षीया सासूको रेखदेख र स्याहारसुसार गर्दै उनको दिन बितिरहेको थियो । तर आम्दानीको भने कुनै स्रोत थिएन । घरमा भएको अन्नले जीविका चले पनि नुनतेल त किन्नै पथ्र्यो । उनले वर्षातमा फल्ने चिउरी टिपेर नुनतेलको जोहो गर्थिन् । आम्दानीको स्रोत बनेको चिउरीको बोटले नै उनलाई जीवनमरणको दोसाँधमा पु¥याउला भन्ने कहिल्यै सोचिकी थिइनँ । उनको जीवनमा नसोचेकै घटना घट्यो ।
गत असारमा चिउरी टिप्न रूख चढेकी उनी खुट्टा चिप्लिएर भुइँमा बजारिन पुगिन् । रूखबाट लडेर अचेत अवस्थामा रहेकी उनी गाउँलेको सहयोगमा घरसम्म पुगिन् । उपचारका लागि रोल्पा जिल्ला अस्पताल पु¥याइएकी उनको त्यहाँ उपचार हुन नसकेपछि भैरहवा लगियो । कम्मरमुनिको पूरै भाग नचल्ने भएपछि शल्यक्रिया गरियो । भैरहवा अस्पतालको २१ दिनको बसाइपछि उनी घर फर्किइन् ।
उनीहरु सदरमुकाममा रहेका दुई सरकारी विद्यालयमा पढ्छन् । विसी, विविका र बीमा बालकल्याण माविमा पढ्छन् भने कान्छी रीया बालमन्दिर प्राथमिक विद्यालयमा पढ्छिन् । राम्रो लाउने, मीठोखाने उनीहरुका लागि एकादेशको कथाजस्तो भएको छ । बुबाको वात्सल्यबाट वञ्चित उनीहरु आमाको रोगी र जीर्ण शरीर मायाको स्रोत बनेको छ ।
परिवारमा राम्रो सम्बन्ध रहेको साढुभाइमा एकाएक आएको परिवर्तनले आफूलाई आश्चर्य लागेको तिलुमारीका भिनाजु पूर्णसिंह पुनको भनाइ छ । अन्य केटीसँग सम्बन्ध भएर घरमा सम्पर्कविहीन भएको पूर्णसिंहको भनाइ छ । लिवाङमा होटेल व्यवसाय गर्ने पुनले तिलकुमारीको रेखदेख तथा बालबच्चाको शिक्षादीक्षा र पालनपोषणको काम गर्दै आएका छन् ।
यति गर्न नसकिएला ?
राजधानीकै सुधार केन्द्रमा यस्तो! २५ बर्षिय युवाको शंकास्पद मृत्यु भएपछि…
दुई वर्षदेखि हराएका श्रीमानको खोज्न छापा मार्न पुगिन श्रीमति, झापा चारपानेमा जे देखियो (हेर्नुस् भिडियो)
“मेरो तलवले पुग्ने भए सबै डोनेट गरेर बचाउँथे,” नर्स अनिता थापा (भिडियो हेर्नुहोस्)